ANDRO MANERAN-TANIN’NY MAHANTRA (tapany I) - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
P Rodin Rabotovao il y a 1 année
(Journée mondiale des pauvres)
“Atsory amin’ny mahantra ny tananao” (Si 7, 32)
1°) Tantara fohy momba ny Andro maneran-tanin’ny mahantra
Ny alahady 13 novambra 2016 dia anjaran’ireo mahantra sy tsy manan-kialofana manerana an’i Eoropa (SDF, sans domicile fixe) no novorian’ny Papa François tao amin’ny bazilikan’i Md Piera. Tamin’ny toriteniny no nilazany fa manomboka izao, isaky ny alahady mialoha ny fetin’i Kristy Mpanjaka, dia hatokana ho andro maneran-tanin’ny mahantra. Nambarany tamin’ny fomba ofisialy izany ny 20 novambra 2016, alahady faha 33 mandavan-taona, fetin’i Kristy Mpanjaka, no sady famaranana ny taon-jobilin’ny famindram-pon’Andriamanitra. Nambarany mazava izany tao amin’ny taratasy apostolika nosoratany nampitondrainy ny lohateny hoe “misericoardia et misera” izay midika hoe ny famindrampon’Andriamanitra eo anatrehan’ny fahoriana. Izany fankalazana izany dia mba hahafahana miomana bebe koa amin’ny fetin’i Kristy Mpanjakan’izao tontolo izao izay miseho amin’ny mahantra sy ny madinika, sy ilay hitsara ny olona amin’ny asa fangorahana ny mahantra ataony araka ny voalaza ao amin’ny Mt 25, 31-46.
Misy antony ny nandraisan’ny Papa ny anaran’i Md François d’Assise, satria ny fitiavana ny mahantra sy ny zavaboary no tena manentana azy. Fantatr’ireo Franciscains maneran-tany sy ireo rehetra miaina ny aim-panahin’i Md François izany fironana bebe kokoa amin’ny mahantra sy ny zavaboary izany.
Ny 19 novambra 2017, alahady faha 33 mandavan-taona no nankalazana voalohany ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity. Tamin’ny fanentanana nataon’ny Papa tamin’ny 2017 no nilazany fa tsy olana na vesatra ho an’ny fiarahamonina akory ny mahantra fa loharano andraisana sy iainana ny tena hevitry ny evanjely. Ka ny lohahevitra nentina niaina izany fankalazana voalohany izany dia ny tenin’Andriamanitra nalaina tao amin’ny 1 Jo 3, 18 : “Anaka, aza mitia am-bava sy amin’ny teny fotsiny, fa amin’ny asa sy amin’ny fo tokoa”.
Zavatra telo no nanentanany antsika tamin’izany dia ny mba hanana :
1) fiangonana mahantra ho an’ny mahantra
2) fitoriana ny evanjely ataon’ny mahantra ho an’ny mahantra
3) fandraisana sy fihaonana amin’ny mahantra
Ny taona 2018 no fankalazana faharoa ka ny lohahevitra tamin’izany dia nalaina tao amin’ny Sal 33, 7 : “Niantso ny mahantra dia nohenoin’ny Tompo”
Tamin’ny 2019 no fankalazana fahatelo ka ny lohahevitra tamin’izany dia notsongaina tao amin’ny Sal 9, 19 : “Fa ny mahantra tsy mba hadinoina hatrany; ny fanantenan’ny ory tsy rava mandrakizay.”
Tamin’ny alahady 15 novambra lasa teo, alahady faha 33 mandavan-taona no fanamarihana fahefatra amin’ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity, ka ny lohahevitra anentanan’ny Papa François antsika dia nalaina tao amin’ny Si 7,32 : “Atsory amin’ny mahantra ny tananao”
Samy manana ny fomba entiny anamarihany sy iainany an’ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity ny firenena, ny diosezy sy ny paroasy ary ny ankohonana tsirairay avy. Fa ny zava-dehibe dia ny hanokafantsika tsirairay avy ny varavaran’ny fontsika amin’ny mahantra amin’izay toerana rehetra misy antsika.
Marihina fa isaky ny 13 jona, fetin’i Md Antoine de Padoue, pretra Franciscain, fantan-daza amin’ny fitiavany ny mahantra sy ny fanaovany fahagagana no anoratan’ny Papa François sy anomezany antsika ireo hafatra mikasika ny lohahevitra ankalazaina isan-taona.
2°) Famaritana ny hoe mahantra
Raha faritana tsotsotra ny hoe fahantrana dia enti-milaza an’ireo endrika tsy fahampiana eo amin’ny fiainana andavanandro. Izany hoe ny mahantra dia ireo olona na vondron’olona tsy manana sakafo ampy, tsy manan-kialofana, tsy manana antom-pivelomana, tsy manana lamba fitafy mendrika, tsy manana ny ampy entina miatrika ny fiainana amin’ny lafiny rehetra (fitsaboana, fanabeazana, sns…). Raha ny famaritana omen’ny Banque Mondiale dia ny vola entin’ny olona iray mivelona isan’andro no andrefesany ny fahantrana. Izany hoe tokony hivelona ambonin’ny 1,9 dolara na 7500 Ar eo ho eo isan’andro ny olona ka izay mivelona ambanin’io vola io dia mahantra avokoa. Raha ny eto Madagasikara, araka ny antontanisa navoakan’ny Banque Mondiale tamin’ny 26 novambra 2018 dia maherin’ny 92%-n’ny vahoaka malagasy no anaty fahantrana tanteraka.
3°) Inona avy ireo karazam-pahantrana
Anisan’ny zavatra sarotra ny mamaritra an’ity fahantrana ity satria raha zohina dia toa mahantra avokoa ny olona rehetra. Hita sy tsapa izany rehefa miresaka amin’ny olona eny anivon’ny fiarahamonina eny. Samy milaza ho sahirana avokoa ny olona rehetra. Azo lazaina izany fa tsy izay tsy manan-kialofana na tsy mitafy na tsy misakafo ihany no hoe mahantra fa ireo izay mijaly amin’ny lafiny maro samihafa, satria miseho amin’ny endrika maro ny fahasahiranana sy fahantrana mahazo :
- ny olona mijaly amin’ny lafiny rehetra (ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy) sy marefo ary ianjadian’ny endrika fanilikilihana na fanavakavahana
- ireo olona tsy manana ny ampy entina hiatrehana ny fiainana, tsy manan-kohanina, tsy manana trano ipetrahana, tsy an’asa, tsy manam-bola hiatrehana ny fiainana andavanandro amin’ny lafiny rehetra
- ny voafonja na any an-tranomazina na ireo voagejan’ny zavatra maro samihafa eo amin’ny fiainany (ireo andevozin’ny fitiavan-tena, toaka, rongony….)
- ny olona marary amin’ny endriny maro samihafa (ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy)
- ireo olona manirery, kamboty sy tsy misy mpiahy
4°) Inona no atao hoe fahantrana araka ny Evanjely? (pauvreté evangelique)
Ny fahantrana no fototra ijoroan’ny evanjely ka raha esorina io teny hoe fahantrana io dia tsy misy zavatra ho azontsika intsony ny hafatra tian’i Jesoa hambara satria naneho izany fahantrana ary niaina izany tanteraka izy. Teraka tao an-tranon’omby, voromahailala no natolotr’ireo ray aman-dreniny tao an-tempoly satria izany no tolotra voatondro homen’ny mahantra, mpangalatra no mpitazona ny volany (i Jodasy), niaina toy ny mahantra, nesorina taminy hatramin’ny fitafiany teo ambony hazofijaliana (teraka tao anatin’ny fahantrana ary maty tao amin’ny fahantrana).
Hitantsika ihany koa fa teo akaikin’ireo mahantra mandrakariva izy ary tsy natahotra ny fanakianana sy ny fanenjehana nataon’ny olona azy. Miara-mihinana amin’ny poblikanina sy ny mpanota, ry Zakea izay fanta-daza ho mpangalatra, manaiky miara-mipetraka amin’ireo vehivavy ratsy laza, sy ilay vehivavy samaritanina.
Ny fahantran’i Jesoa dia manome fahafahana lehibe ho azy ka tsy nisalasala niteny ny tsy rariny teo amin’ny fiarahamonina izy, satria ny hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra no vaindohan-draharaha teo amin’ny fiainany ka nanentanany an’ireo mpianany ihany koa mba tsy hikatsaka ny vola aman-karena. Fa hanatanteraka sy hikatsaka ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra atao : “katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany dia homena anareo ny sisa hafa rehetra” (Mt 6,33).
Hitantsika ihany koa rehefa naniraka an’ireo mpianany izy dia niteny hoe : “ aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa, na kiraro sns…” (Lk 10,4-7). Ny fanatanterahantsika ny sitrapon’Andriamanitra no harena voalohany ho antsika ka higohantsika ny fahasambarana ary hahazoantsika ny hafaliana eo am-panatanterahana ny asany satria niverina an-kafaliana tokoa ireo mpianatra rehefa avy nanatanteraka ny asa fanirahana azy (Lk 10,17).
Betsaka ireo toetran’ny mahantra nananan’i Jesoa sy niainany toy ny fiankinan-doha tanteraka amin’ny Rainy, tsy mitady ny tombontsoa ho azy, tsy mirehareha, malemy fanahy, manetry tena, tsy mieboebo, mahay mihaino sy mandray ny hafa, ary vonona mandrakariva ny handeha sy mizara ny fahorian’ireo marary, mijaly, tsy manan-kohanina.
Koa ireo toetra rehetra ireo no anentanana an’ireo rehetra manokan-tena ka te hiaina ny torohevitra aroson’ny evanjely momba ny fahantrana; ka tsy fahantrana natao hanandevo tsy akory fa fahantrana natao hanafaka amin’ny lafiny rehetra ka higohana ny harena miavosa omen’Andriamanitra, dia ny fahasoavana amin’ny fianteherana sy ny fahatokisana azy.
5°) Inona no ambaran’ny Bokin’i Ben Sira amin’ity hafatra ity?
Ny tenin’Andriamanitra nalaina tao amin’ny bokin’i Ben Sira no nentin’ny Papa François hampahatsiahivana antsika tamin’ity andro maneran-tanin’ny mahantra taona 2020 ity fa ao am-pon’ny Eglizy avokoa ireo karazana olona voalaza etsy ambony ireo, ary tokony ho tsapan’ny kristianina fa endrika isehoan’i Kristy ireny mahantra sy ireo rehetra tsy misy mpiahy eo anivon’ny fiarahamonina ireny.
Iza moa i Ben Sira?
Raha ny Baiboly malagasy no jerena dia Siràka na Ekleziastika no ilazana azy. Fa teny hebrio io Ben Sira io izay midika hoe Zanak’i Siràka. Teo amin’ny Jody dia ny anaran-drainy no amantarana na iantsoana ny zanaka. Izany hoe ny teny hoe Ben = zanaka. Torak’izany ihany koa ny Arabo; ohatra amin’izany ny hoe Ben Laden izay midika hoe ilay zanak’i Laden. Nolovaintsika avy amin’ireny kolontsaina ireny ihany ny anarana eo amintsika Malagasy satria rehefa miteraka i Rakoto dia Razanadrakoto no ataony anaran’ny zanany ary rehefa miteraka Razanadrakoto dia lasa Razafindrakoto ny anaran-janany.
Hiverina amin’ny bokin’i Siràka isika. Zava-dehibe loatra ny FAHENDRENA teo amin’ny vahoaka jody ka nokatsahiny fatratra izany satria tsy misy fiainana vanona ary tsy misy zavatra mandeha raha tsy eo ny fahendrena. Jereo i Salomona mpanjaka, zavatra tokana no hany nangatahiny tamin’Andriamanitra talohan’ny nandraisany ny fanjakana dia ny fahendrena, ka nomen’Andriamanitra azy izany; eny fa nahazo mihoatra noho izay nangatahiny aza izy (1 Mp 3, 9-13). Aiza ho aiza isika kristianina amin’izany fikatsahana fahendrena izany ? Sa mety mahafaly antsika ve ny misary adala indraindray ??? Ary ireo mpitondra isan’ambaratongany eto amintsika ? Modely ve izy ireny amin’ny fihetsika ataony ary mahay mikatsaka ny fahendrena sy izay mahasoa ny vahoaka entiny ve izy ireny ?
Io fahendrena voalaza ao amin’ny bokin’i Siràka izay nokatsahiny sy niainan’ireo olona tamin’izany fotoana izany io no hany afaka handravana ny toe-tsaina samy maka ho azy sy tsy miraharaha na mijery ny hafa, manjaka eto amintsika ankehitriny.
Koa izany fanehoana fahendrena eo amin’ny fiainana andavanandro izany no ambaran’ny bokin’i Siràka. Betsaka ireo torohevitra na fananarana omeny mba hahafahantsika maneho fitondran-tena mendrika eny anivon’ny fiarahamonina sy ny Eglizy misy antsika. Ohatra amin’izany ny voalaza ao amin’ny Si 2, 2-7 mikasika ny fahantrana.
Ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity dia andro natokana handraisana sy hihaonana bebe kokoa amin’ny mahantra. Anehoana amin’ny tsirairay fa tsy misy olona mahavita tena eo amin’ny fiainana fa natao hifanampy amin’ny zavatra rehetra isika. Tiana hasongadina etoana fa tsy misy olona miankin-doha na iankinan-doha, na miantehitra sy ianteherana fa mpiray tampo mifandray sy mifanampy ny olona rehetra, satria Andriamanitra mihitsy no mamory sy mampiray antsika eto amin’ity fiainana mandalo ity ary sarobidy eo imasony isika ka omeny fo mahay mangoraka sy mifanampy. Andro manan-daza tokoa àry ity andro ity satria androm-pifaliana sy andron’ny fanantenana amin’ny maha zanaka tian’Andriamanitra antsika sy amin’ny maha iray antsika ao amin’ny fianakaviamben’Andriamanitra.
Tsy hahafoana tanteraka ny fahantrana ny Eglizy kanefa ny asa fiantrana ataontsika amin’ny mahantra dia hanova endrika izany fahantrana izany satria izany fihetsika feno fitiavana sy fanompoana izany no anehoantsika ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny lafiny rehetra. Tsy manana tanana hampiasaina eo anivon’izao tontolo izao Andriamanitra fa ny tanantsika tsirairay no ampiasainy hanehoany ny hatsaram-pony.
Ny fanampiana ny hafa dia fihetsika maneho fitiavana sy manome dikany ny fiainana, maneho fiombonana sy firaisan-kina ka ny fahazaintsika mifampitsinjo sy mifanampy no amantarana sy andrefesana ny finoantsika marina, satria ny Fanahy Masina noraisintsika tamin’ny batemy no maniraka antsika hitory ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny mahantra eo amin’ny asa fanompoana ataontsika araka ny voalaza ao amin’ny Iz 61, 1-3 => Lk 4,18 -19.
Tsy ho very mandeha ny olona miantehitra sy mitoky amin’Andriamanitra fa hahazo fahasambarana eo amin’ny fiainana. Tsy ilay fahasambarana araka ny fihevitry ny olona anefa izany fa ilay fahasambarana araky ny fihevitr’Andriamanitra dia ilay fahasambarana maharitra sy mitondra hafaliana.
Hita taratra amin’ity fahendrena eto ity ny fahasoavana omen’Andriamanitra an’izay miantehitra Aminy. Izy ilay hany marina sy mitsinjo ary mitantana ny vahoakany rehetra. Ny olon-kendry dia izay mahalala miombona amin’Andriamanitra ary manahaka ny toetrany satria noharin’Andriamanitra mitovy endrika aminy ny olombelona, ka ny endrika tiana hambara eto dia ny toetra feno fitiavana, faharetana, fahamarinana sy fiadanana, fangorahana ireo mahantra sy mijaly.
Koa izany fifandraisana lalina amin’Andriamanitra izany no manentana antsika amin’ity fankalazana ny andro maneran-tanin’ny mahantra ity, izay notsongaina tamin’ny Bokin’i Siràka (Si 7, 29-36).
Tsy afa-misaraka ny vavaka atao amin’Andriamanitra sy ny fanampiana sy ny fitsimbinana ary ny fiombonana amin’ny mahantra. Mandainga izay milaza fa mpivavaka kanefa tsy manana fo mangoraka ireo madinika ka manao izay vitany hanehoana ny fitiavana azy ireny amin’ny fomba maro samihafa. Antitranterina hatrany ny asa atao anehoana ny finoana satria poakaty ny finoana raha tsy arahina asa araka ny ambaran’i Md Jakoba 2, 14-18.
Hafatry ny FEM (Eveka eto Madagasikara) : “Ianareo ho vahoakako, izaho ho Andriamanitrareo” (Jr 30,22) - il y a 11 jours